स्टक बजार लगानीमा प्रायः सबैभन्दा बढि सम्भावना हुन्छ। तर यो पनि व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा गाह्रो छ। धेरैका लागि स्टकमा लगानी गर्नु पूर्ण-समयको काम हो जसलाई पूर्ण योजना र अनुसन्धान चाहिन्छ। यसबाहेक, यसले उच्च जोखिम बोक्छ र एकल गलत चाल पनि महँगो साबित हुन सक्छ।
तसर्थ, स्टक किन्नु सजिलो प्रक्रिया होइन। त्यसैगरी, तपाईले कति समय स्टक राख्ने भनेर निर्णय गर्नु पनि हुँदैन। जे होस्, यी कारकहरूले तपाइँको लगानीबाट कति सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर स्टक राख्नको लागि आदर्श अवधि के हो? तपाईको सबै स्टक लगानीको लागि काम गर्न सक्ने समीकरण छ? जान्नका लागि पुरा लेख पढ्नुहोस् |
स्टक होल्ड गरेर राख्नु भनेको के हो?
स्टक होल्ड गर्नु भनेको यसलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु हो। अर्को शब्दमा, यो तपाइँ एक स्टक किन्न र बेच्ने बीचको समय हो। विभिन्न स्टकहरूको लागि यो समय फ्रेम फरक हुन सक्छ। आदर्श रूपमा तपाईले अधिकतम नाफा नआएसम्म स्टकमा समात्न चाहानुहुन्छ। यदि कुनै स्टकको मूल्य घटिरहेको छ र तपाईंले सुधार देख्नुभएन भने तपाईंले यसलाई न्यूनतम घाटामा बेच्न सक्षम हुनुपर्दछ।
दीर्घकालीन लगानी किन राम्रो हुन्छ?
दीर्घकालीन लगानी भनेको तपाईंले कम्तिमा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म राख्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग ऐतिहासिक फाइदा छ र वारेन बफेट जस्ता पौराणिक लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन लगानी फिर्ता गर्छन्। यसलाई लोकप्रिय बनाउने दीर्घकालीन लगानीका केही प्रमुख फाइदाहरूबारे छलफल गरौं।
माथि भनिएझैं, ऐतिहासिक फाइदाहरूले दीर्घकालीन लगानीलाई फिर्ता दिन्छ। उदाहरणको लागि सेन्सेक्सको कुरा गरौं। गत साल २०२० अप्रिल मा २०१७ पछि सबैभन्दा कम मा पुगेको थियो जब महामारीले यसको वास्तविक रंग देखाउन सुरु गरेको थियो। जनवरी १, २०२० मा सेन्सेक्समा लगानी गर्ने कोहीले अप्रिल ४, २०२० सम्म आफ्नो लगानीको लगभग ३३% गुमाएका थिए।
तर मानौं, लगानीकर्ताले दीर्घकालीन छनोट गरी दुई वर्षसम्म लगानीमा बस्ने निर्णय गरेको भए, महामारीको समयमा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि उनीहरूको लगानी करिब ४०% बढ्ने थियो । यो कुनै पृथक घटना होइन। सेयर बजार वर्षौंदेखि बढ्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति अधिकांश स्टकहरूमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। जबसम्म कम्पनीले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ, कम्पनीहरूको स्टक मूल्यहरू लामो अवधिमा साना गिरावटहरू सच्याउन्छन्।
तर फेरि, यो सबै स्टकहरूको लागि आवश्यक छैन। केही स्टकहरू वर्षहरूमा घटेका छन्, तर मुख्य रूपमा कम्पनीको खराब प्रदर्शनका कारण।
दीर्घकालीन लगानीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा कम्पाउन्डिङ हो। कम्पाउन्डिङ भन्नाले लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई लगानीमा नै फिर्ता जम्मा गरिन्छ र मिश्रित रकमले प्रतिफल प्राप्त गर्छ। सेयर बजारको लगानीको हकमा पनि यही हो । मूल्य वृद्धि लगानीकर्तालाई भुक्तान गरिएको छैन र यसको सट्टा यो स्टक मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस बिन्दुबाट स्टकले त्यो चक्रवृद्धि रकममा लाभ गर्नेछ।
यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण लिऔं।
मानौं तपाईंले रु १०० मा एक स्टक किन्नु भयो। गणनाको सजिलोको लागि मानौं कि स्टकले लगातार दुई दिनको लागि प्रत्येक दिन १०% ले बढ्यो। अर्थात् पहिलो दिनपछि स्टकको मूल्य रु.११० हुँदा दिनको रु.१० नाफा हुनेछ।
दोस्रो दिन सेयर रु १०० मा नभई रु.११० मा कारोबार सुरु हुनेछ। दिनको अन्त्यमा, १०% लाभ संग शेयर मूल्य रु. १२१ हुनेछ र त्यो दिनको लागि रु.११ को नाफा हुनेछ।
दुवै दिन शेयर मूल्य १० प्रतिशत मात्र बढे पनि कम्पाउन्डिङका कारण नाफा बढेको हो । तर यो एक दिनको लागि मात्र हो। जब तपाईं लामो समयको लागि लगानीमा रहनुहुन्छ, कम्पाउन्डिङ प्रभावले तपाईंको नाफामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ।
गैर भावनात्मक व्यापार:
शेयर बजार एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ भावनाहरू उच्च हुन सक्छ। व्यापारले वास्तविक पैसा समावेश गर्दछ र तपाइँ सम्भावित रूपमा भाग्य जित्न सक्नुहुन्छ वा सेकेन्डमा तपाइँको सम्पूर्ण लगानी गुमाउन सक्नुहुन्छ। यही कारणले गर्दा डर र भावनाहरू स्टक बजार व्यापारमा एक परिभाषित कारक बन्छन्। तर जब तपाईले लामो अवधिको लागि लगानी गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, तपाईले अचानक र सानो डुब्नलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो पोर्टफोलियोको कार्यसम्पादन नियमित रूपमा ट्र्याक गर्न आवश्यक छैन तर तपाईंले दिनहुँको आधारमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन। यसले तपाईंलाई आफ्नो लगानी निर्णयहरूमा भूमिका खेल्ने भावनाहरूबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ, तपाईंलाई निश्चित माथिल्लो हात दिँदै।
दीर्घकालीन लगानीहरू प्राय: सिक्ने अवधि पनि हुन्। उदाहरणका लागि, जब तपाईंले आफ्नो लगानीहरू विभिन्न आर्थिक परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेको देख्नुहुन्छ| तपाईंले स्टक बजारहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सिक्न र बुझ्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई भविष्यमा तपाईंको लगानी निर्णयहरूमा महत्त्वपूर्ण रूपमा मद्दत गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न आर्थिक चरणहरूले पनि तपाईंको लगानीको क्षितिज प्रकट गर्न सक्छन्। तपाईंले वास्तवमा बुझ्नुहुन्छ कि तपाईंले कस्तो जोखिम पेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो लगानीबाट के चाहनुहुन्छ।
स्टक कहिले बेच्ने?
यसको जवाफ प्रायः तपाइँको लगानी लक्ष्य के हो मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं लामो अवधिको लागि खेलमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले स्टक आफ्नो चरम सीमामा पुगेको वा लगानीको राम्रो अवसर भएको सोच्नुभएपछि लगानी गर्ने सही समय हो। तर एकै समयमा, यदि तपाईंले गलत गणना र गलत स्टकमा लगानी गर्नुभएको छ भने लगानीले महत्त्वपूर्ण घाटा निम्त्याउनु अघि बेच्ने उत्तम रणनीति हो। तर यो कठिन हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईले सानो घाटालाई पतनको रूपमा गलत व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ र अनावश्यक रूपमा पैसा गुमाउनको लागि मात्र डुब्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, तपाईले बेच्नु अघि एक सावधानीपूर्वक विश्लेषणको आवश्यकता छ।
के तपाइँले घाटा बनाउने स्टक राख्नु पर्छ?
त्यहाँ विभिन्न परिदृश्यहरू छन् जहाँ स्टक घाटा हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, यो आर्थिक अवस्था वा कम्पनी संग सम्बन्धित घटनाहरु को कारण एक अस्थायी घाटा स्ट्रीक हुन सक्छ। यहाँ कार्यको उत्तम पाठ्यक्रम भनेको स्टक मूल्यहरू आफैं सच्याउन पर्खनु हो। यसबाट पछि हट्ने भावनात्मक निर्णय अफसोसजनक हुन सक्छ। तर एकै समयमा, यदि कुनै कम्पनीको स्टक मूल्य लामो समयको लागि घटिरहेको छ र पुनरागमनको कुनै आशा छैन भने तपाईंले बुलेट काटेर लगानीबाट फिर्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ। तर, कुनै स्टकको मूल्य घट्दा परिदृश्य के हो भन्नको लागि कुनै निश्चित तरिका छैन। के मद्दत गर्न सक्छ, यद्यपि, उचित विश्लेषण र व्यापार अनुभव हो।
आदर्श होल्डिङ अवधि के हो?
शेयरको लागि एक आदर्श होल्डिंग अवधि सधैं व्यक्तिपरक हुन्छ। यसबाहेक, आदर्श मानिने कुरा पनि व्यक्तिपरक हुन सक्छ। तसर्थ, स्टक बजार लगानीको बारेमा जाने उत्तम तरिका भनेको आफ्नो लगानी लक्ष्य अनुसार होल्ड गर्नु हो। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँको लक्ष्य कम्पनीको वृद्धिको प्रयोग गरेर दीर्घकालीन लाभहरू कटनी गर्ने हो भने, यो थप विस्तारित समयको लागि लगानी गरिरहनु राम्रो हुन्छ। दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि राखिएका स्टकहरूले तपाईंलाई उत्कृष्ट प्रतिफल दिन्छन्।
एकै समयमा, यदि तपाइँको लक्ष्य छोटो अवधि हो भने, तपाइँको होल्डिंग अवधि पनि छोटो हुन सक्छ। तर छोटो अवधिका लक्ष्यहरू जोखिमपूर्ण र हासिल गर्न कठिन हुने गर्दछ।
शताब्दीयौंको इतिहासमा पनि सेयर बजारहरू जटिल र धेरै लाभदायक छन्। जहाँ सफलताको लागि कुनै कडा र छिटो नियमहरू छैनन्| इतिहासले प्रमाणित गर्दछ कि विश्लेषण, लगनशीलता, र तपाईंको योजनाहरूमा अडिग रहने क्षमताले तपाईंलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ।